Xildhibaan shaacir “Araajida lagama Aqabalayo xildhibaanada wasiirada ah ilaa ay is casilaan” – Daily Som
Waxaa sii xoogaysanaya Tartanka loogu jiro Xilka Gudoomiyha Baarlamaanka Fedaraalka ah ee Soomaaliya, kaas oo dhawaan baneeyay Gudoomiyihii Haayay lixdii sano ee ugu danbeysay.
waxaana soo baxayo shuruudo adag oo lagu xirayo Wasiirada Doonaya in ay qabtaan xilkaan, waxaama loo sheegay in marka hore ay baneeyaan kagada Wasiirnimo si ay ugu soo baxaan Booska banaan ama ugu guul daraystaan.
Xildhibaan Cabdulahi maxamed aadan shaacir ayaa sheegay in aan Codsiga Araajida laga qaban doonin Qof Xukuumada Xil ka haaya hadii aanu iska Casilin Xilka uu uu haayo ee wasiirnimo.
“Xubnaha Golaha Wasiirada ee isku soo sharaxay xilka Guddoomiyaha Golah Shacabka, waa inuu iska soo casilaa xilka Wasiirka uu haayo, hadii kale lagama qabanayo araajida, waa inuu istiqaalad u gudbiyaa Ra’iisul Wasaaraha, isla markaana nuqul ka mid ah uu u keenaa Guddiga, hadhow hadii uu waayo Ra’iisul Wasaaraha haka noqdo hadduu rabo”ayuu yiri.
Xildhibaan shaacir ayaa sheegay in Xubnaha Gudiga Joogtada ah ay isku qaybiyeen dhowr qaybood oo kala duwan sida Amaanka, Maaliyada, Hab maamuuska oo ka shaqayn dpona sidii loo dooran lahaa Gudoomiyaha Baarlamaanka.
Maalinimadii shalay ayaa la magacaabay Gudi ka kooban 15 Xubnood kuwaas oo doortay Gudoomiye iyaga oo udoortay Xildhibaan Nuur Iidow Bayle.
Ugu dambayna Saamaynata ugu badan ayaa ku imaan doonta Wasiirada ka tirsan Xukuumada ee isku sharaxay xilka Gudoomiyaha Golaha shacabka waxa ayna wayn karaan hadii ay ku gfuul daraystaan xilka Xubinimadooda wasiirnimo.
Xildhibaan shaacir “Araajida lagama Aqabalayo xildhibaanada wasiirada ah ilaa ay is casilaan” added by Staff on April 22, 2018